Ekoatora · Mey, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Ekoatora · Mey, 2011
Jona 2018 5 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Ekoatora tamin'ny Mey, 2011
Fifidianana 25 Mey 2011
Ekoatora: Telo Taona Taorian'ny Lozabe “Factory”
Fanoherana 24 Mey 2011
Ny 19 Aprily 2011 no nanamarika ny faha-3 taonan'ilay Tantara malazan'ny Factory: ny firehetana tao amin'ny Factory, toeram-pandihizana iray tao Quito tamin'ny 2008, tamin'izay no nisy fampisehoana Gothic-rock. 19 no maty vokatr'ilay firehetana ary 24 no naratra mafy. Tamin'ity tsingerintaona ity, nisy fanomezam-boninahitra sy hetsika iray natao mba hanentanana ny olona mikasika ity olana ity nataon'ny fianakaviana sy naman'ireo tra-doza.
Ho Fahatsiarovana an'i Paulina Aguilera, Mpanoratry ny Global Voices
Shily 16 Mey 2011
Malahelo mafy tokoa izahay tamin'ny nahafatesan'i Paulina Aguilera Muñoz, mpanoratry ny Global Voices, mpanao gazety, mpitoraka bilaogy, ary renim-pianakaviana niteraka roa. Avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, nandefa ny fiaraha-miory sy mari-panajana ho an'ilay mpiaro tsy misy fepetra ny zon'olombelona izahay